အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ(၂၀၁၀) - မှတ်စုစာအုပ်
၂၀၁၀ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလအတွင်း လူထုဆန္ဒခံယူပွဲဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သည့် မြန်မာ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် အညီ ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်းသည်လည်း နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ‎ (နအဖ) မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် အဆိုပြုခဲ့သည့် ‘ဒီမိုကရေစီ လမ်းပြမြေပုံ’ပါ အဆင့် ၇ ဆင့်တွင် ပဉ္စမမြောက် ခြေလမ်းဖြစ်သည်။ ဆဋ္ဌမနှင့် သတ္တမ အဆင့်များမှာ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသူ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များ ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ခေတ်မှီတိုးတက်သည့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော် ထူထောင်ရေးတို့ဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲသည်လည်း ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ်ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများကို ၂၀၁၀ မတ်လ ၉ ရက်နေ့မှစကာ အစိုးရပိုင် သတင်းစာများမှ အချပ်ပိုအဖြစ် ရှေ့စဉ်နောက်ဆက် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံး ‘ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေ’ ကို ၂၀၁၀ မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ ယင်းဥပဒေအရ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ တာဝန်များမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများအား ကြီးကြပ်ရေး တို့ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် အနည်းဆုံး ၅ ဦးကို နအဖမှ ခန့်အပ်တာဝန်ပေး နိုင်သည်ဟု ရေးသား ပါရှိသည်။ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် အသက် (၅၀) ပြည့်ပြီးသူများ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့် ဂုဏ်သတင်းရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် နအဖက ယူဆသူဖြစ်ရမည်ဟု ပါရှိသည်။
နအဖအစိုးရသည် ၁၁ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းမှတစ်ဆင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။ ယခုဖွဲ့စည်းသည့် ကော်မရှင်တွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၇ ဦးပါရှိပြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဒုတိယ တရားသူကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိုးကို ခန့်အပ်လိုက်သည်။
၁၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် ‘နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ’တွင် ပါတီထူထောင်လိုသူ၊ သို့မဟုတ် ပါတီဝင် ဖြစ်လိုသူများသည် ထောင်ဒဏ် ကျခံနေရသူ မဖြစ်စေရဟု ပြဌာန်း ထားသည့်အပြင်၊ ပစ်ဒဏ်ကို အယူခံနေဆဲ ဖြစ်သူလည်း မဖြစ်ရဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
Myanmar leader says 2010 election plans on course. Kuwait Times. November 30, 2008.
Myanmar Top Leader Advises People To Make Correct Choice With Upcoming Election. Bernama.4January 2010.
Kipgen, Nehginpao (29 December 2009). "Reconciliation Myanmar Needs", Korea Times.
လာမည့် နိုဝင်ဘာတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်။ (ဧရာဝတီ)
နအဖ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေ ထုတ်ပြန် (ခေတ်ပြိုင်)
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ တရားမမျှတဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော (ဧရာဝတီ)
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေထုတ် (ဘီဘီစီ)